MR MRT: တရားမင်းသခင် - ၄၉။ အဇ္ဈတ္တ ကောက်ကြောင်း
တရားမင်းသခင် - ၄၉။ အဇ္ဈတ္တ ကောက်ကြောင်း
ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ် သာကေတမြို့မှ သာဝတ္ထိမြို့သို့ ကြွတော်မူလာနေပြီဟု သတင်းကြားရသော အနာထပိဏ် သူဌေးကြီးသည် ဘုရားရှင် ကြွတော်မူလာမည့် လမ်းတစ်လျှောက်လုံးကို အလံများ နဖူးစီးများဖြင့် တန်ဆာဆင်စေ၏။ ထို့နောက် ဘုရားရှင်ကို ကြိုဆိုရန် မြင်းဆွဲယာဉ် တစ်စီးဖြင့် ထွက်လာခဲ့၏။ ရှင်ဥဒါယီလည်း သူဌေးကြီးနှင့်အတူ မြင်းဆွဲယာဉ်ဖြင့် လိုက်ပါလာ၏။ ရှင်ဥဒါယီသည် ရှင်မဟာကဿပ၏ ထံတော်ပါး၌ ရဟန်းပြုခဲ့ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝ၍ ထည်ဝါခန့်ငြားသည့် မြို့တော်သာဝတ္ထိ၌ သီတင်းသုံးတော်မူနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောင်းမြေကို ရွှေဒင်္ဂါးခင်း၍ ၀ယ်ယူခဲ့ရသော အနာထပိဏ် သူဌေးကြီး၏ ကောင်းမှုတော် ဇေတ၀န်ကျောင်းကို ရှင်ဥဒါယီက ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်နေ၏။ ယခုအခါ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ရှင်ဥဒါယီနှင့် ကျောင်းဒါယကာ အနာထပိဏ်တို့သည် ဘုရားရှင်ကို ကြိုဆိုကြမည် ဖြစ်၏။ ရှင်ဥဒါယီသည် လမ်းတစ်လျှောက်လုံး နှုတ်ဆိတ်လျက် လိုက်ပါလာရင်း ဘုရားရှင်ကို လျှောက်တင်မည့် စကားလုံးများကို စိတ်ဖြင့်မှန်း၍ ကဗျာလင်္ကာ စီကုံးနေ၏။
ထိုစဉ် “အရှင်ဘုရား . . . ဘုရားရှင် နီးလာရော့မယ်။ တပည့်တော်တို့ ဆင်းလျှောက်ကြတာ ကောင်းမယ်ထင်တယ် ဘုရား”ဟု သူဌေးကြီးက ရှင်ဥဒါယီကို လျှောက်ထားလိုက်၏။
“သူဌေးကြီး . . . ဘုရားရှင် တစ်ဂါဝုတ် ခရီးအတွင်း ၀င်တော်မူလာပြီဆိုရင် သိနိုင်ပါတယ်”ဟု ရှင်ဥဒါယီက မိန့်တော်မူ၏။
“အရှင်ဘုရား . . . တကယ် သိနိုင်ပါ့မလား။”
“သိနိုင်ပါတယ် သူဌေးကြီး . . .။ လောကသုံးပါးမှာ ဘုရားရှင်လောက် ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်တဲ့သူမှ မရှိတာပဲ။ ဘုရားရှင်ဟာ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပါ။ ဘုရားရှင် ဒေသစာရီ ကြွတော်မူရင် . . . ရှေ့တော်ပြေး အနေနဲ့ ရနံ့သင်းတဲ့ လေးညှင်းက အရင်လာတယ် . . .။ လေက ပန်းတွေကို ကျဲချဖြန့်ခင်းပေးတယ်။ မြေပထ၀ီမှာလည်း မို့မောက်တာတွေ ချိုင့်ခွက်တာတွေ မရှိတော့ဘဲ ပြင်ညီဖြစ်သွားတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းကို ခံယူဖို့ ကြာပန်းတွေ မြေထဲက ထွက်လာကြတယ်။ အထက်နတ်ဘုံက နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေကလည်း နတ်တူရိယာတွေ တီးခတ်ရင်း သာဓုသံတွေ သီကြွေးကြတယ် . . .။”ဟု ရှင်ဥဒါယီက သူဌေးကြီးကို ရှင်းပြ၏။
ရှင်ဥဒါယီမှာ ကြည်ညိုသဒ္ဓါပွားလျက် ရွှင်လန်းတက်ကြွနေလေသည်။
“အရှင်ဘုရား . . . အရှင်ဘုရားက ဘုရားရှင်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖူးပြီးပြီမို့လား။”
“ဘုရားရှင်ကို မဖူးရသေးပေမယ့် ဘုရားရှင်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖူးဖူးတဲ့သူတွေထက် ပိုပြီးတော့တောင် ဘုရားရှင်အကြောင်း ပြောပြနိုင်ပါတယ် . . .။”
“အရှင်ဘုရားက ဘုရားရှင်ရဲ့ တပည့်သား သံဃာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေ့မယ့် ဘုရားရှင်ကို ဖူးမှ မဖူးဘူးသေးတာပဲ။ တပည့်တော်က ရာဇဂြိုဟ်မြို့ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်မှာ ဘုရားရှင်ကို အားရပါးရ ဖူးခဲ့တာပါ။ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် ဟောတော်မူတဲ့ တရားတော်တွေကိုလည်း နာခဲ့ရတာပဲ။ ဘုရားရှင်ဟာ လူသားတွေထဲမှာ အကြီးမြတ်ဆုံး ဖြစ်တော်မူတယ် ဆိုတာပဲ တပည့်တော် ကြားခဲ့ရတာပါ ဘုရား။ အဲဒါလည်း တရားတော်တွေကို နှုတ်တော်လျှာတော်အာတော် ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်အောင် ဟောတော်မူနိုင်လို့ပါ၊ ဣနြေ္ဒတွေ ကြည်လင်နေတဲ့ ရူပကာယတော်ကြေင့်ပါ။ တရားဓမ္မကြောင့်ပါ။ နတ်တွေ သိကြားတွေ ဗြဟ္မာတွေ ၀ိုင်းဝန်းမြှောက်ပင့်ပြီး ဂုဏ်တင်ပေးကြလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တပည့်တော်ရဲ့ ရှေ့မှာ ဘုရားရှင်ကို ကဗျာဉာဏ်နဲ့ အမွှန်းမတင်စမ်းပါနဲ့ ဘုရား။ အရှင်ဘုရား ဒါတွေ ပြောချင်ရင် ဉာဏ်နည်းတဲ့ ဒကာဒကာမတွေဆီ သွားပြောပါ . . .။ လူအထင်ကြီးအောင် ကြွားဝါတာ မြှောက်ပင့်တာမျိုးတွေကို တပည့်တော် မကြိုက်ပါဘူး . . .။”
သူဌေးကြီးက ဤသို့ ဆိုသောအခါ ရှင်ဥဒါယီ နှုတ်ဆိတ်သွား၏။ သူ၏ ရှက်ရွံ့မှုကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ ပြောလိုက်ဖို့ စဉ်းစားနေလေသည်။
နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းသည် မြို့တော်သာဝတ္ထိ၌ အချိန်ကာလ အတန်ကြာအောင် နေပြီးနောက် သာဝတ္ထိမှ သာကေတသို့ သွားနေ၏။ မြို့နှစ်မြို့ကို ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမကြီးမှာ ဖုန်ထူပြီး ညစ်ပတ်လှ၏။ နေမင်းက ချစ်ချစ်တောက် ပူနေသည်။ လောင်ကျွမ်းလုနီးပါး ပူပြင်းသည့် နေရောင်ခြည်အောက်၌ လျှောက်လှမ်းနေသူ နာဋပုတ္တသည် ကိုယ်လုံးတီး တက္ကဒွန်းဖြစ်၏။ ဖိနပ်စီးခြင်း ခေါင်းဆောင်းခြင်းလည်း မပြုပေ။ နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းနှင့် တစ်ခရီးတည်း နှင်နေသော အနာထပိဏ် သူဌေးကြီးသည် မင်းသားဝဘကို စွန့်လွှတ်၍ အတ္တကိလမထာနုယောဂအကျင့် ကျင့်နေသူ နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်း၏ အသွင်အပြင်ကို ကောင်းစွာမှတ်မိ၏။ နောက်မှလှမ်း၍ မြင်လိုက်သည်နှင့် နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းမှန်း သိလိုက်သည်။ သူဌေးကြီး၏ မြင်းဆွဲယာဉ်သည် နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်း၏ အနီးသို့ ချဉ်းကပ်နေ၏။ သူဌေးကြီးသည် မြင်းဆွဲယာဉ်ကို ရပ်လိုက်ပြီး ယာဉ်မှဆင်း၍ နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်ထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ အရိုအသေပြု ရှိခိုး၏။ နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းသည် ကျက်ကျက်ပူသည့် မြေသားလမ်းပေါ်၌ ရပ်လျက် သူဌေးကြီးအတွက် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ပြုပေးသည့် အနေဖြင့် လက်ကို ဝှေ့ရမ်းနေ၏။
“အရှင်ဘုရား . . . ရှင်တော်ဂေါတမ သာဝတ္ထိကို ကြွလာတော်မူနေပါပြီ။ တပည့်တော်တို့ သူ့ကို ကြိုဖို့ လာခဲ့ကြတာပါ။ ရာသီဥတုက ပူလွန်းပါတယ် . . .။ တပည့်တော်တို့နဲ့အတူ လိုက်ခဲ့ဖို့ လျှောက်ထားပါတယ် . . . ။”
“သူကြွယ် . . . တော်ပြီ။ ခန္ဓာကိုယ် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့ ငါ မစဉ်းစားဘူး။ ငါတို့လို ရဟန်းတွေအတွက် ခြေလျင်ကြွတာ ပိုကောင်းတယ်။ ကျင့်သားလည်း ရနေပြီ။”
“ဒါဆိုလည်း တပည့်တော်တို့ သွားလိုက်ပါအုံမယ် ဘုရား . . .။”
“သူကြွယ် . . . အောင်ခြင်းမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံပါစေ။”
အနာထပိဏ် သူဌေးကြီးသည် နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းကို ကျော်တက်နေစဉ် ယာဉ်ကို ဖြည်းဖြည်းသက်သာ မောင်းနှင်ရန် အမိန့်ပေးလိုက်၏။ နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းကို ကျော်တက်ပြီးသည့် တိုင်အောင်လည်း ယာဉ်သည် ဖြည်းဖြည်းသာ သွားနေ၏။ သူဌေးကြီးသည် တက္ကဒွန်းဆီသို့ ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်း တစ်စုံတစ်ရာကို အလေးအနက် စဉ်းစားနေ၏။ သူဌေးကြီးက တက္ကဒွန်းကို အာရုံစိုက်လွန်းနေသည့်အတွက် ရှင်ဥဒါယီ မကျေမနပ် ဖြစ်မိ၏။ ဒေါသလွှမ်းသည့် လေသံဖြင့် ရှင်ဥဒါယီ ဆို၏။
“သူဌေးကြီး . . . ဘာဖြစ်လို့ ဒီ ကိုယ်တုံးလုံး တက္ကဒွန်းကို အရေးစိုက်နေရတာလဲ။ နာဋပုတ္တဟာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ။ သူ့ကို အရိုအသေ ပေးတာဟာ ဘုရားရှင်ကို စော်ကားတာနဲ့ အတူတူပဲ။”
“အရှင်ဘုရား . . .။ နာဋပုတ္တကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရိုအသေ မပေးရဘူးလို့ ဘုရားရှင်က ဘယ်နေရာမှာ ဟောခဲ့ဖူးလို့လဲ။”
“အဲဒီလိုတော့ မဟောပါဘူး သူဌေးကြီး . . .။ ဒါပေမယ့် ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမ တရားတော်တွေကိုပဲ အမြင့်ဆုံး အမြတ်ဆုံးလို့ ခံယူထားကြတာဆိုတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ သာဝကပဲ ဖြစ်ကြရမှာပေါ့။ ဘုရားရှင်ကိုပဲ ရှိခိုးကြရမှာပေါ့။”
“ဒါကတော့ . . . အရှင်ဘုရားရဲ့ အမြင်ပဲ . . .။ ဒါ . . . ဘုရားရှင်ရဲ့ အမြင် မဟုတ်ဘူး။ ပူရဏကဿပက ဟောတယ်။ ကုသိုလ်လည်း မရှိဘူး၊ အကုသိုလ်လည်း မရှိဘူး၊ ကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးလည်း မရှိဘူး၊ အကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးလည်း မရှိဘူး၊ သုဂတိဘ၀လည်း မရှိဘူး၊ ဒုဂ္ဂတိဘ၀လည်း မရှိဘူး၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း ဖျက်ဆီးခြင်းတွေဟာ ကုသိုလ်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ အကုသိုလ်လည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ဟောတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ပူရဏကဿပရဲ့ ပါးစပ်ဟာ ရေစီးကြောင်းမှာ ချထားတဲ့ ငါးထောင်တဲ့ မြှုံးနဲ့တူတယ်လို့ ဘုရားရှင်က မှတ်ချက်ချတော်မူတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားရှင်ဟာ ဘယ်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်ကိုမှ ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ နှိမ့်ချတော်မူတာ မဟုတ်ဘူး . . .။ ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေဖို့၊ ပူဇော်သင့်သူကို ပူဇော်ဖို့ပဲ ဘုရားရှင် ဟောတော်မူတာ။ တကယ်လို့သာ ဘုရားရှင်က သူ့ကိုယ်သူပဲ ကြွားဝါမြှောက်ပင့်မယ်၊ သူ့တရားတွေကိုပဲ ဂုဏ်တင်ချီးကျူးမယ်၊ တစ်ခြားဘာသာတွေကိုတော့ အထင်သေးမယ် ရှုပ်ချမယ်ဆိုရင် တပည့်တော် အနေနဲ့ သူ့သာသနာတော်ကို ထောက်ပံ့ဖို့ ငွေတွေသန်းချီပြီး သုံးစွဲခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလို သူ့ကို ကြိုဆိုချင်စိတ်လည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။”
ရှင်ဥဒါယီ ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ပေ။ ပူပြင်းသည့် နေရောင်ခြည်ဖြင့် လောင်မြှိုက်အပ်သော လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် မျှော်ခေါ်၍ ကြည့်လိုက်ရာ အ၀ါရောင် တစ်ခုကို မြင်လိုက်ရ၏။ ဖန်ဝါသင်္ကန်း ဆင်မြန်းထားသည့် ရဟန်းအသွင် ဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း ခရီးကွာဝေးလျက် ရှိသေးသည်။ သို့သော် သူဌေးကြီးသည် ယာဉ်ကို အရှိန်သတ်ရန် ညွှန်ကြားလိုက်ပြီး အ၀ါရောင် ရဟန်းအသွင်ကို စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်နေ၏။ ယာဉ်ပေါ်မှာပင် မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး လက်အုပ်ချီမိုးကာ ရဟန်းသွင်ကို လှမ်း၍ ဦးညွတ်ရှိခိုးလေသည်။ ထိုစဉ် ရှင်ဥဒါယီက ဆို၏။
“သူဌေးကြီး . . . ဘုရားရှင် ဒေသစာရီ ကြွတော်မူရင် ရဟန်းတော်တွေနဲ့ အတူ ကြွတော်မူတာပါ။ ဘုရားရှင် တစ်ပါးတည်း ကြွတော်မူလေ့ မရှိဘူး။ ဘုရားရှင်နဲ့ အသွင်တူတဲ့ ရဟန္တာ တစ်ပါးပါးပဲ။ ဥပဇ္ဈာယ် အရှင်မြတ်ကြီး ရှင်မဟာကဿပလား မသိပါဘူး . . .။ ဘုရားရှင် မဟုတ်ပါဘူး။”
“နာဋပုတ္တ ကိုယ်တော်နဲ့ တွေ့တုန်းကလိုပဲ ယာဉ်ပေါ်က မဆင်းဘဲသာ နေခဲ့တော့။ တပည့်တော်ကတော့ ဆင်းပြီ။ ဘုရားရှင်ကို ခြေလျင်ဆီးကြိုမယ် . . .။”
သူဌေးကြီးနှင့် ယာဉ်မောင်းတို့ မြင်းဆွဲယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ကြပြီး ခြေလျင်ဆက်လျှောက်ကြသည်။ ရှင်ဥဒါယီကား ယာဉ်ပေါ်မှာပင် ဆက်လက်၍ ထိုင်နေရင်း ဘုရားရှင် ကြွတော်မူလာမည့် ဘက်သို့ လှမ်းမျှော်ကြည့်နေ၏။ ဘုရားရှင်ဆီ ရည်ရွယ်၍ လက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုးလျက်သားနှင့် တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်နေသည့် သူဌေးကို ရှင်ဥဒါယီ မြင်နေရ၏။ ကြွလာနေသည့် ရဟန်းအသွင်လည်း ဖြည်းဖြည်းချင်း ထင်ရှားလာ၏။ ဘုရားရှင်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်ရလေပြီ။ သို့သော် ဘုရားရှင် ကြွချီသည့် ခြေလှမ်းတိုင်းကို ခံယူရန် ကြာပန်းများ မြေမှ ထွက်ပေါ်လာသည်ကို ရှင်ဥဒါယီ မတွေ့ရပေ။ လမ်းပေါ်ရှိ မြူအညစ်အကြေးများကို ပယ်ရှားရန် ရွာချသော မိုးဖွဲဖွဲကိုလည်း မတွေ့ရပေ။ သင်းရနံ့ကို သည်ဆောင်လာသည့် လေပြေကိုလည်း မရှူရှိုက်မိပေ။ သို့သော် သူ့မျက်လုံးများနှင့် သူ့နှလုံးသားကို အလွန်အမင်း နှစ်သိမ့်စေနိုင်သော၊ အေးငြိမ်းသက်သာမှု ပြည့်လျှမ်းနေသည့် ဘုရားရှင်၏ အတုမဲ့ မျက်နှာတော်ကို ဖူးမြင်လိုက်ရ၏။ ချက်ချင်းပင် မတ်တတ်ရပ်လိုက်ပြီး ယာဉ်ပေါ်မှ ခုန်ချကာ ဘုရားရှင်ထံသို့ ပြေးဝင်သွားလေ၏။
ဘုရားရှင် ကြွချီတော်မူစဉ် ရှင်ဥဒါယီသည် ဘုရားရှင်နှင့် ကပ်လျက်သား လိုက်ပါနေ၏။ သူဌေးကြီးလည်း ဘုရားရှင်၏ အနီးမှာ ကပ်လျက်ပင် လိုက်ပါနေ၏။ အလွန်အကျူး နှစ်ထောင်းအားရ ရှိနေသူ သူဌေးကြီးသည် ဘုရားရှင်ကို လျှောက်ထား၏။
“မြတ်စွာဘုရား . . . ချစ်ချစ်တောက် နေပူနေပေမယ့် အရှင်ဘုရားရဲ့ ထံတော်ပါးမှာ ရှိနေရလို့ တပည့်တော် ပင်ပန်းတာတွေ မခံစားရပါ ဘုရား။ အရှင်ဘုရားရဲ့ အရိပ်ဟာ နှစ်သက်စရာ ကောင်းလှပါတယ် ဘုရား။ အရှင်ဘုရားကို ဖူးမြင်ရတာ ကျေနပ်အားရ ရှိလပါတယ် ဘုရား။ ဒီနေ့လို နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ နေ့မျိုး မကြုံဖူးခဲ့ပါ ဘုရား။”
ဤသို့ အနာထပိဏ် သူဌေးကြီး လျှောက်ထားပြီးသည်နှင့် တူရူအရပ်မှ လာနေသည့် နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းကို မြင်လိုက်ရ၏။ ဤဇမ္ဗူဒိပ်၌ ဖွားမြင်ခဲ့ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်နှစ်ဦးတို့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် တွေ့ကြတော့မည့် အခါသမယပင် ဖြစ်သည်ဟု တွေးမိသူ သူဌေးကြီး၏ နှလုံးသားထဲ၌ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှု ဂယက်ငယ် ထသွား၏။ သူဌေးကြီးသည် တူရူမှ လာနေသူ နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းကို ဘုရားရှင် သိတော်မူမည်မဟုတ်ဟု ထင်မိသဖြင့် ဘုရားရှင်နှင့် ပို၍နီးအောင် တိုးကပ်လိုက်ပြီး ခရီးရင်ဆိုင်မှ လာနေသူမှာ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း လေသံတိုးတိုးဖြင့် လျှောက်ထားလိုက်၏။
“သူဌေးကြီး . . . ငါ သူ့ကို မမြင်ဖူးခဲ့ပေမယ့် အခု မြင်မြင်ချင်းပဲ သူဆိုတာ သိလိုက်တယ်။”
နှစ်ဘက်လုံးက ပုံမှန် လျှောက်လှမ်းနေကြရာ အချင်းချင်း နီးကပ်လာကြ၏။ သူဌေးကြီး၏ ရင်မှ စိုးရိမ်စိတ်လည်း ပိုမိုကြီးမားလာ၏။ ရှင်ဥဒါယီသည် လမ်းမ၏ လက်ျာဘက်ဘေးမှာ ကပ်၍ လျှောက်လာနေသူ နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းကို မျက်မှောင်ကြုတ်၍ မလိုတမာ လှမ်းကြည့်လိုက်၏။ ကိုယ်လုံးတီး နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းသည် သူ၏ အရှက်တရားကို သူ့သပိတ်နှင့် ဖုံးကွယ်ထား၏။ ဘုရားရှင်နှင့် တက္ကဒွန်းတို့ ရှောင်ကွင်းလိုက်ကြစဉ် ရှင်ဥဒါယီသည် လည်ချောင်းခြစ်သံဖြင့် ချောင်းသုံးချက် ဟန့်လိုက်၏။
ဘုရားရှင်သည် ရှင်ဥဒါယီ၏ ချောင်းဟန့်သံကို ကြားလိုက်ရသည်နှင့် တုံ့ခနဲ ရပ်တန့်တော်မူလိုက်ပြီး ရှင်ဥဒါယီကို ခေါ်တော်မူ၏။
“ဥဒါယီ . . . ဒီကို လာခဲ့စမ်း . . .။”
ရှင်ဥဒါယီသည် “အရှင်ဘုရား . . .”ဟု ထိတ်ထိတ်ပြာပြာ ထူးလိုက်၏။
“အချည်းနှီး ရဟန်း . . .။ သင်ဟာ မောက်မာတဲ့စိတ်နဲ့ နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းကို ပစ်မှားစော်ကားလိုက်ပြီ။ ဒီတော့ သင့်ဆရာ ငါ့ကိုပါ စော်ကားရာရောက်တယ်။ အခု သွား။ နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းကို တောင်းပန်လိုက်။”
ချက်ချင်းပင် ရှင်ဥဒါယီ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ချွေးပျံသွား၏။ ရှင်ဥဒါယီသည် ခေါင်းငိုက်စိုက်ချလျက် တက္ကဒွန်းနောက်သို့ ခပ်သုတ်သုတ် လိုက်သွား၏။ တက္ကဒွန်းကို မီသောအခါ တက္ကဒွန်းကို အရိုအသေပေးကာ တောင်းပန်စကား ဆို၏။ တက္ကဒွန်းသည် လက်ျာလက်ကို ဝှေ့ရမ်းလျက် ကောင်းချီးပြုနေ၏။ အနာထပိဏ် သူဌေးကြီးသည် အဖြစ်အပျက်ကို စောင့်ကြည့်နေသည်။ သူဌေးကြီးသည် ဘုရားရှင်ကိုရော နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းကိုပါ ပို၍ လေးစားသွား၏။ ဘုရားရှင်၏ ခြေတော်အစုံ၌ ပြားဝပ်၍ ဦးတိုက်ရှိခိုးရင်း ဘုရားရှင်ကို လျှောက်ထား၏။
“မြတ်စွာဘုရား . . . အရှင်ဘုရားရဲ့ မြင့်မြတ်မှုအတွက် အရှင်ဘုရားရဲ့ ခြေတော်အစုံကို ဦးတိုက်ပါတယ် ဘုရား။ နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းလည်း သူတော်စင်ပါပဲ ဘုရား . . .။ သူ့ကိုလည်း တပည့်တော် ရှိခိုးလိုက်ပါဦးမယ် ဘုရား . . .။”
သူဌေးကြီးသည် ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် မတ်တပ်လိုက်ပြီး နာဋပုတ္တ တက္ကဒွန်းနောက်သို့ ပြေးလိုက်သွား၏။
Mary Grace July 24, 2012 at 3:51 AM